हरियो आलु खानु र विष पिउनु समान हुन्छ किन ? जानी राखौँ – Etajakhabar
ताजा खबर :-आलु संसारको सबै भुभागमा प्रयोग गरिन्छ । आलु तपाईले प्रत्येक घरको भान्सामा पाउन सक्नु हुन्छ । आलु हाम्रो मुख्य खानेकुरामा पर्छ । अझ भन्नु पर्दा आलुलाई त तरकारीको राजा नै मानिन्छ । तर, के तपाईलाई आलुका प्रकारका बारेमा थाहा छ त ? आलुको रंगरुप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर तपाईले कहिल्यै बिचार गर्नु भएको छ, कतिपय आलु हरियो रंगको पनि हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ०८, २०७३ समय: २३:५१:०८